आजको राशिफलमा के लेखेको छ तपाईंको भाग्यमा ? २०७५ असोज १४ गते – Pahilo Page
आजको राशिफलमा के लेखेको छ तपाईंको भाग्यमा ? २०७५ असोज १४ गते
१४ आश्विन २०७५, आईतवार ०९:३९ 363 पटक हेरिएको
वचन पुर्याउन नसक्दा व्यवहारमा पछि परिनेछ। सञ्चित रकम खर्च हुनाले अर्थ अभाव सामना गर्नुपर्ला। प्रयत्न गर्दा मिहिनेतले काम बनाउन सकिनेछ। बुद्धिको उपयोगले विद्या तथा धन आर्जन गर्न सकिनेछ। केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। आफ्ना कमजोरीबाट प्रतिस्पर्धीहरूले लाभ उठाउने चेष्टा गर्नेछन्, गोपनीयतामा सजग रहनुहोला।
परिस्थितिवश चिताएको काम सम्पादनमा विलम्ब हुनेछ। कामको मेसो नमिल्दा पनि अलमल हुनेछ। समयको गतिलाई पछ्याउन नसक्दा दुःख पाइनेछ। मनोरञ्जनमा अलमलिँदा काममा पछि परिनेछ। समय अनुकूल रहे पनि भौतिक सुविधाले खर्च निम्त्याउन सक्छ। रमाइलो क्षणमा पनि मन खिन्न रहनेछ। निम्तो प्राप्त भए पनि आतिथ्य खर्चिलो बन्ने देखिन्छ।
परिश्रम परे पनि लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। विवाद तथा मुद्दाहरूमा आफ्नो पक्ष बलियो रहनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सकिनेछ। लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ र पछिका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन्, मनग्गे फाइदा उठाउन सकिनेछ। शत्रु र रोगबाट भने सजग रहनुपर्ला।
अरूको भरपर्दा धोका पाइनेछ भने मिहिनेत गर्दा नतिजा सकारात्मक हुनेछ। प्रयत्न गरेका काम सम्पादन हुनेछन्। अभिभावक तथा शुभचिन्तकहरूले राम्रो साथ दिनेछन्। अध्ययनमा गुरुजनको मार्गदर्शन अवलम्बन गर्दा फाइदा हुनेछ। भौतिक साधन जुट्नाले जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ। केही चुनौतीहरूसँग जुध्नुपरे पनि अवसरले काममा उत्साह जगाउनेछ।